‘यी ४ कुरालाई ध्यान दिए ८० प्रतिशत रो’गनै लाग्दैन’– डा.भगवान कोइराला - Mitho Khabar
‘यी ४ कुरालाई ध्यान दिए ८० प्रतिशत रो’गनै लाग्दैन’– डा.भगवान कोइराला
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on ‘यी ४ कुरालाई ध्यान दिए ८० प्रतिशत रो’गनै लाग्दैन’– डा.भगवान कोइराला
काठमाँडौ – बरिष्ठ मुटु रोग बिशेञषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले चार कुराको कारण मु’टुरो’ग तथा अन्य ८० प्रतिशत रो’ग नसर्ने दाबी गर्नु भएको छ । कान्तिपुर टेलिञभिजनको चर्चित कार्यक्रम ‘फायर साईड’ चलाउने पत्रकार भुषण दाहाल संग गरेको धेरै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य्रवार्तामा बताउनु भएको हो ।
अन्तरवार्ताको क्रममा डा. कोईरालाले नेपालमा भईरहेको मृ’त्यु करिब दुई तिहाई अर्थात ६० प्रतिशत भन्दा बढि नसर्ने रो’गहरुबाट हुने गरेको समेत बताउनु भएको छ । जस्तै डा’ईरीया,झा’डापा’खाला ,मा’तृशि’शुबाट मृ’त्यु हुने गरेको छ । साथै मु’टु रो’ग,दमले समेत मृ’त्यु हुने गरेको उनले बताएको छ ।
कोइरालाले ८० प्रतिशत भन्दा धेरै प्रिम्याचुरिट मृ’त्यु हुने गरेको समेत बताएको छ । दैनिक जिवनमा खाने गरेको खाना,बानी व्यवाहारको कारणले गर्दा मृ’त्यु हुने उहाँको तर्क रहेको छ । उहाँका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमुख ४ ओटा कारण हर्ट ए’ट्याक,दम,क्यान्सार भन्छ भने नेपाल लगायत साउथ एसियाको हकमा इनडोर र आउट डोरको कारणले पनि मृ’त्यु हुने गरेको बताएको छ ।
वरिष्ठ मु’टुरो’ग विशेषज्ञ डा। भगवान कोइरालाले अहिलेसम्म १४ हजारभन्दा बढी बिराञमीको मु’टु बचाइसकेका छन् । मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले चार कुरामा ध्यान दिए मुटु लगायतका अधिकांश रोगबाट बच्न सकिने मन्त्र दिएका छन् ।
यि चार कुरामा ध्याञन दिन सके मुटु रो’ग लगायतका ८० प्रतिसत सरुवा नहुने रो’ग्रबाट बच्न सकिने डाक्टर कोइ्ररालाको दाबी छ । नेपालमा हुने मृ’त्युहरुमा सबै भन्दा बढी अर्थात् दुई तिहाई मृ’त्यु नसर्ने रोगञहरुबाट हुन्छ जसमा मुटु रो’ग उच्च स्थानमा रहेको छ ।
अन्तर्वार्ताको क्रममा डाक्टर कोइरालाले केहि अचुक स्वास्थ्य सुत्र भने जसको प्रयोगले सिंगो नेपाली जनताले सदैब स्वास्थ्य लाभ लिनु सक्ने छन् तर के जनता पालना गर्नु तयार छन् ?
हेर्नुस महत्वपूर्ण अन्तञर्वार्ता
फोक्सो सफा गर्न यस्ता चिज खानुस
नेपालमा कोरोना : संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दै, आज ४७६२ मात्र थपिए